စီးရပ်စ် (ဂြိုဟ်သိမ်ဂြိုဟ်မွှား) - ဝီကီပီးဒီးယား
(စီးရပ်စ် (ဂြိုလ်သိမ်ဂြိုလ်မွှား) မှ ပြန်ညွှန်းထားသည်)
A view of Ceres in natural color, pictured by the Dawn spacecraft in May 2015.[lower-alpha ၁]
rarely Cererean /sɛrɪˈriːən/
6999184882727663759♠10.593° to ecliptic
သင့်တော်သည့် ဆီမီး မေဂျာဝင်ရိုး
78.193318 ဒီဂရီ / yr
7001540702720000000♠54.070272 arcsec / yr
2998408299660000000♠−59.170034 arcsec / yr
(7002965200000000000♠965.2 × 7002961200000000000♠961.2
× 7002891200000000000♠891.2) ± 2.0 km
အီကွေတာ မျက်နှာပြင် ဒြပ်ဆွဲအား]]
6999370000000000000♠0.37[lower-alpha ၂] (estimate)
အီကွေတာ လွတ်မြောက် အလျင်
≈ 168 K 235 K
ပကတိ အရွယ်အစား (H)
စီးရပ်စ် (အင်္ဂလိပ်: Ceres; /ˈsɪəriːz/) သည် နေအဖွဲ့အစည်းအတွင်းမှ အသေးငယ်ဆုံးသော ဂြိုဟ်သိမ်ဂြိုဟ်မွှားဖြစ်ပြီး ပင်မ ဥက္ကာခါးပတ် (asteroid belt) အတွင်းတွင် ရှိသော တစ်ခုတည်းသော ဂြိုဟ်သိမ်ဂြိုဟ်မွှားဖြစ်သည်။ အဲရစ်ကို ၁၈၀၁ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၁ ရက်နေ့တွင် Giuseppe Piazzi မှ ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။
သစ်ပင်စိုက်ပျိုးခြင်း၊ စိုက်ပျိုးရေးနှင့် မိခင်မေတ္တာနှင့်ဆိုင်သော ရောမနတ်ဘုရားမ စီးရပ်စ်ကို အစွဲပြု၍ အမည်ပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ရှာဖွေတွေ့ရှိပြီး နှစ်ပေါင်း ၂၀၀ ခန့်မျှကြာသော အချိန်တွင် နိုင်ငံတကာ နက္ခတ္တ သမဂ္ဂ (International Astronomical Union) မှ အဲရစ်စ်အား ဥက္ကာခဲ သို့မဟုတ် အသေးစားဂြိုဟ် (asteroid or minor planet) အဖြစ်မှ ဂြိုဟ်သိမ်ဂြိုဟ်မွှားအဆင့် (dwarf planetary status) သို့ ၂၀၀၆ ခုနှစ်တွင် တိုးမြှင့်ပေးခဲ့သည်။
အချင်းအားဖြင့် ၉၅၀ ကီလိုမီတာသာ ရှိသဖြင့် စီးရပ်စ်သည် ဥက္ကာခါးပတ်အတွင်းမှ အကြီးဆုံးအရာဝတ္ထုတစ်ခုဖြစ်ပြီး ခါးပတ်တစ်ခုလုံး အလေးချိန်၏ သုံးပုံတစ်ပုံမျှရှိသည်။ လတ်တလော လေ့လာမှုများအရ စီးရပ်သည် ပုံသဏ္ဌန်မမှန်ပဲ ဆွဲငင်အားနည်းသော အသေးစားအရာဝတ္တုများကဲ့သို့မဟုတ်ပဲ လုံးဝန်းသော ပုံသဏ္ဍန်ရှိကြောင်းတွေ့ရှိရသည်။ သူ၏ အလင်းလက်ဆုံး အချိန်၌ပင်လျှင် သာမန်မျက်စိဖြင့် မြင်နိုင်ရန် အလွန်မှုန်ဝါးနေသေးသည်။ ၂၀၀ရ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၂၇ ရက်နေ့တွင် နာဆာမှ Dawn Mission အာကာသလေ့လာစူးစမ်းရေးယာဉ်ကို စီးရပ်စ် နှင့် ဗက်စ်တာ (Vesta) တို့ကို စူးစမ်းရန်အတွက် လွှတ်တင်ခဲ့သည်။
↑ This image was taken by the Dawn spacecraft on2May 2015, duringa"rotation characterization" orbit, ၁၃,၆၄၂ ကီလိုမီတာ (၈,၄၇၇ မိုင်) above the surface of Ceres. Visible at center and center right are two bright spots,aphenomenon common on Ceres, in Oxo and Haulani craters respectively. Ahuna Mons is also visible in the image asanoticeable, bluff hill, seen just right of bottom.
↑ The value of 0.37 is the mean moment of inertia, which is thought to better represent Ceres' interior structure than the polar moment of inertia (0.39), due to the high polar flattening.
↑ Schmadel, Lutz (2003). Dictionary of minor planet names, 5th, Germany: Springer, 15. ISBN 978-3-540-00238-3။
↑ Simpson, D. P. (1979). Cassell's Latin Dictionary, 5th, London: Cassell Ltd, 883. ISBN 978-0-304-52257-6။
↑ The MeanPlane (Invariable plane) of the Solar System passing through the barycenter (3 April 2009)။ Archived from the original on 14 May 2009။ 10 April 2009 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ (produced with Solex 10 Archived 29 April 2009 at WebCite written by Aldo Vitagliano; see also Invariable plane)
↑ 1 Ceres။ JPL Small-Body Database Browser။ Archived from the original on4August 2012။ 8 January 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ AstDyS-2 Ceres Synthetic Proper Orbital Elements။ Department of Mathematics, University of Pisa, Italy။ Archived from the original on5October 2011။ 1 October 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၆.၀ ၆.၁ ၆.၂ 05. Dawn Explores Ceres Results from the Survey Orbit။ Archived from the original on5September 2015။
↑ ၇.၀ ၇.၁ ၇.၂ ၇.၃ ၇.၄ Calculated based on the known parameters
↑ ကိုးကား အမှား - Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named Lakdawalla1112
↑ ၉.၀ ၉.၁ ကိုးကား အမှား - Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named Park2016
↑ "Ceres lightcurve analysis – Period determination" (2007). Icarus 188 (2): 451–456. doi:10.1016/j.icarus.2006.11.025. Bibcode: 2007Icar..188..451C.
↑ ၁၁.၀ ၁၁.၁ Asteroid Ceres P_constants (PcK) SPICE kernel file။5November 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "The Ceres gravity field, spin pole, rotation period and orbit from the Dawn radiometric tracking and optical data" (2018). Icarus 299: 411–429. doi:10.1016/j.icarus.2017.08.005. Bibcode: 2018Icar..299..411K.
↑ ၁၃.၀ ၁၃.၁ ကိုးကား အမှား - Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named Li2006
↑ ကိုးကား အမှား - Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named Rivkin2006
↑ ကိုးကား အမှား - Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named Pasachoff1983
↑ APmag and AngSize generated with Horizons (Ephemeris: Observer Table: Quantities = 9,13,20,29) Archived5October 2011 at WebCite
↑ Angelo, Joseph A., Jr (2006). Encyclopedia of Space and Astronomy. New York: Infobase, 122. ISBN 0-8160-5330-8။
↑ ကိုးကား အမှား - Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named Saint-Pe1993
↑ Piazzi, Giuseppe (1801). Risultati delle osservazioni della nuova Stella scoperta il dì 1 gennajo all'Osservatorio Reale di Palermo (in Italian)။
↑ Ceres at Solarviews.com
နေ - ဗုဒ္ဓဟူးဂြိုဟ် - သောကြာ(သို့)ဗီးနပ်စ်ဂြိုဟ် - ကမ္ဘာဂြိုဟ် - အင်္ဂါ(သို့)မားစ်ဂြိုဟ် - စီးရပ်စ် - ဂျူပီတာဂြိုဟ် - စနေ(သို့)စေတန်ဂြိုဟ် - ယူရေးနပ်စ်ဂြိုဟ် - နက်ပကျွန်းဂြိုဟ် - ပလူတို - အဲရစ်
ဂြိုဟ် - ဂြိုဟ်သိမ်ဂြိုဟ်မွှားများ - ဂြိုဟ်ရံလများ: လကမ္ဘာ - မားရှန် - ဂျိုဗီယန် - ဆက်တန်နီယန် - ယူရေနီယန် - နက်ပကျွန်းနီယန် - ပလူတိုနီယန် - အီရိုတ်ဒီယန်
Small bodies: ဥက္ကာခဲများ - ဥက္ကာပျံများ/ဥက္ကာပျံ လများ (ပင်မ ဥက္ကာ ခါးပတ်) - Centaurs - TNOs (ကျူးပါး ခါးပတ်/ပြန့်ကျဲ ချပ်ပြား) - ကြယ်တံခွန်များ (Oort Cloud)
See also: List of solar system objects
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=စီးရပ်စ်_(ဂြိုဟ်သိမ်ဂြိုဟ်မွှား)&oldid=407848" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၁ ဇွန် ၂၀၁၈၊ ၀၇:၁၀ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။